Jonga isiCwangciso sakho soMxholo ngeKhonkco yoKhangelo lukaGoogle | Martech Zone
Lwesine, Matshi 5, 2009 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
Abantu abaninzi bayazi Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle Ukungeniswa kwesiza kunye nokuqinisekisa iirobhothi iifayile, Sitemaps kunye nesalathiso. Abonelanga abantu abasebenzisa iinkcukacha-manani zokukhangela ukufumana isicwangciso esicacileyo somxholo wendawo yabo, nangona kunjalo.
Jonga ku Iinkcukacha-manani> Imibuzo Ephezulu Yokukhangela kwaye uyakufumana igridi yedatha emnandi:
Kwicala lasekhohlo legridi zezi Imibuzo yokuKhangela ephezulu yebhlog yakho. Olu luluhlu lwamagama aphambili okanye amabinzana kunye nendawo yeposti yakho okanye iphepha kwisiphumo.
Kwicala lasekunene legridi yimiba eyiyo eyayinjalo ucofe phakathi Ukuqhubeka kunye nenqanaba lokucofa kwabo (CTR). Olu lulwazi olubalaseleyo!
Ngaba la ngamagama aphambili onqwenela ukuba inkampani yakho, indawo okanye ibhlog yakho iboniswe? Ukuba akunjalo, unokufuna ukuphinda ucinge ngomxholo wakho kwaye uqalise ukujolisa ngakumbi kuwo.
Ukuba ubekwe kakuhle kumagama aphambili kodwa izibalo zakho zokucofa azilunganga kakhulu, kuya kufuneka usebenze kwiiPosi zakho zePosi kunye nokuthumela izicatshulwa kunye neenkcazo zemeta). Oku kuthetha ukuba awunazo izihloko ezinyanzelayo kunye nomxholo-abantu bayalibona ikhonkco lakho kodwa bangacofeki kulo.
Ukubeka kakuhle kwiziphumo zokukhangela ayiyo ukuphela komsebenzi wakho. Ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho ubhalwe kakuhle ngokwaneleyo ukuba abantu bacofe kuwo kubaluleke ngakumbi!
tags: UkuThengiswa kweMpahlaI-google webmastersamaphepha aphezuluimibuzo yokukhangela ephezuluWebmaster
Mar 5, 2009 ngo 5:03 PM
Ngaba ungathanda ukuba ungene kwiinkcukacha ezithe kratya malunga nendlela yokusebenzisa olo lwazi. Uncedo lweGW aluloncedo kwaphela.